राजनीति – Online Khabar 24
Oct122021 by admin adminNo Comments
भिडियो हेर्नुस, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पछि विघटिन नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा सक्रिय रामकुमारी झाँक्री आन्दोलनमा अग्र पंतिमा थिइन् । उनले राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक रुपमा गरेको भाषणको विषयलाई लिएर सरकारले मुद्दा नै चलायो। झाँक्री बुद्धनगरस्थित घरबाट पक्राउ नै परिन। चर्को दबाब पछि उनी छुटिन्। प्रमुख राजनीतिक आन्दो’लनमा सक्रिय सहभागी भएकी झाँक्री एमालेको अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै पहिलोपटक मन्त्री बनेकी छन् । एमाले विभाजन भएपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उनी पहिलोपटक मन्त्री बनेकी हुन् । उनले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्। २०३५ साल जेठ १० गते गुल्मीमा जन्मिएकी झाँक्री प्रष्ट र खरो वक्ताका रुपमा चिनिने गर्छिन। गुल्मीको म्यालपोखरी गाविस १ रत्नबहादुर र रनकुमारीकी छोरीको रुपमा रामकुमारी झाँकीको जन्म भएको...
Oct92021 by admin adminNo Comments
विकट गाउँदेखि मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने काे हुन् रामकुमारी झाँक्री ? जान्नुस
काठमाडौं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पछि विघटिन नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा सक्रिय रामकुमारी झाँक्री आन्दोलनमा अग्र पंतिमा थिइन् । उनले राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक रुपमा गरेको भाषणको विषयलाई लिएर सरकारले मुद्दा नै चलायो। झाँक्री बुद्धनगरस्थित घरबाट पक्राउ नै परिन। चर्को दबाब पछि उनी छुटिन्। प्रमुख राजनीतिक आन्दो’लनमा सक्रिय सहभागी भएकी झाँक्री एमालेको अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै पहिलोपटक मन्त्री बनेकी छन् । एमाले विभाजन भएपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उनी पहिलोपटक मन्त्री बनेकी हुन् । उनले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्। २०३५ साल जेठ १० गते गुल्मीमा जन्मिएकी झाँक्री प्रष्ट र खरो वक्ताका रुपमा चिनिने गर्छिन। गुल्मीको म्यालपोखरी गाविस १ रत्नबहादुर र रनकुमारीकी छोरीको रुपमा रामकुमारी झाँकीको जन्म भएको हो । र...
Sep282021 by admin adminNo Comments
वर्षमान पुनलाई यस्तो खतरानक वंशानुगत रोग देखियो, उपचारका लागि यो देश लैजाने तयारी !
पुरा खबर, काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन उपचारका लागि थाइल्याण्ड जाने भएका छन्। जण्डिसको वंशा नुगत समस्या भएका पुन केहीदिनदेखि बिरामी छन्। काठमाडौमा उपचार गराइरहेका उनका परिवारले उपचारका लागि बाहिर लैजाने निर्णय गरेका हुन् । सुमेरु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका पुनलाई बुधबार विदेश उपचारका लागि लैजान लागिएको हो । उनलाई बुधवार बिहान बैंकक स्थित समितिभेज अस्पतालमा लैजाने तयारी गरिएको छ । उनको शरी रमा देखिएको जण्डिसको मात्रा अस्वभाविक रूपमा बढेको बताइएको छ। ४ वर्षअघि पनि पुनलाई यस्तै समस्या देखिएको हो। त्यो बेलामा समेत पुनले बैंककमा उपचार गराएका थिए। यस अघि बैंककमै उपचार गरेका पुनलाई फेरी उतै लगिन लागेको हो । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** ...